Iikhosi eziphezulu ezi-7 eziMfutshane eziFunwayo eMzantsi Afrika 2022
Oktobha 17, 2021 UHarrison uGrace
Iikhosi eziphezulu ezi-7 eziMfutshane eziFunwayo eMzantsi Afrika
Ngaba ukhe weva ngezifundo ezimfutshane ezifunekayo eMzantsi Afrika? Okwangoku, bangaphezulu kwewaka abafundi kwiiyunivesithi ezahlukeneyo zoMzantsi Afrika abathatha izifundo ezifutshane ngelixa bebonelela ngezifundo ezahlukileyo abazithandayo. Apha ngezantsi linqaku elidwelise kwaye licacise iikhosi ezi-7 eziphambili ezinokuthi zifundwe ngabafundi abanomdla eMzantsi Afrika.
UMzantsi Afrika lelinye lawona mazwe aziwa kakhulu kwaye anabantu abaninzi eAfrika amanxweme abo aboshwe emazantsi ziikhilomitha ezingama-2,798, kwaye arhangqwe yi-South Atlantic / Indian Ocean kunye namazwe angabamelwane (Namibia, Zimbabwe, neBotswana) neMozambiki ne-Eswatini (eyayisakuba Swaziland) emazantsi, emantla nasempuma ngokwahlukeneyo.
Ikwindawo esemazantsi eikhweyitha. UMzantsi Afrika waziwa ngobuninzi beentlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo, ngokwahlukahlukana kweebhayom ezizodwa kunye nobomi bezityalo nezilwanyana. UMzantsi Afrika lilizwe elenziwe ngamaqela eentlanga ezohlukeneyo aneenkcubeko, iilwimi neenkolo ezahlukeneyo.
Nokuba ikweliphi inqanaba kwimicimbi yamazwe aphesheya, ifuthe layo elibalulekileyo phakathi kwamazwe oodade, kunye nobulungu bayo kwi-Commonwealth of Nations kunye ne-G20, ulwaphulo-mthetho, intlupheko kunye nokungalingani zihleli zixhaphakile, zishiya inani elikhulu labemi bengasebenzi, benomgangatho ophantsi ngokubanzi. Yokuhlala phakathi kwabemi bayo.
Imfundo eMzantsi Afrika ijongiwe ngamaqumrhu amabini esizwe: iSebe leMfundo esiSiseko (i-DBE) kunye neSebe leMfundo ePhakamileyo noQeqesho (i-DHET) abajongene nezikolo zamabanga aphantsi ze-cum kunye ne-tertiary education cum uqeqesho lomsebenzi ngokwahlukeneyo.
La maziko anendima enkulu ayidlalayo kwicandelo lezemfundo eMzantsi Afrika kwaye aquka: amaziko, nezikolo ezineemfuno ezizodwa.
Ngelixa iSebe leMfundo ePhakamileyo noQeqesho lidlala imisebenzi yalo kwiikholeji zemfundo noqeqesho oluqhubekekayo (ekwabizwa ngokuba ziikholeji zeMfundo noQeqesho lobuGcisa), amaziko emfundo noqeqesho lwabadala, kunye namaziko emfundo aphakamileyo.
1 Yintoni esinokuthi yikhosi emfutshane?
2 Uzifumana njani iikhosi ezimfutshane eziMfuno ePhakamileyo eMzantsi Afrika
3 Iimfuneko zokufaka iZifundo eziFutshane eziMfuno ePhakamileyo eMzantsi Afrika
4 Iikhosi eziphezulu ezi-7 eziMfutshane eziFunwayo eMzantsi Afrika
4.1 Ulawulo lweProjekthi ePhambili
4.2 Marketing yedijithali
4.3 Ulwalamano lwaBathengi
4.4 Uqeqesho Lwabameli bezeMpilo noKhuseleko
4.5 Uphuhliso lweZofthiwe
5 Ii-FAQ kwiiKhosi eziMfutshane eziFunwayo eMzantsi Afrika
Yintoni esinokuthi yikhosi emfutshane?
Iikhosi ezimfutshane yenye yeendlela zokuqhubela phambili izakhono zakho kwicandelo lomsebenzi onikeziweyo. Lithuba elihle lokufunda ngakumbi ngendawo onomdla kuyo. Ikhosi emfutshane sisiseko sokufunda esingaphantsi kakhulu kune-4-5 yenkqubo yesidanga kwaye ivumela abafundi abanomdla ukuba bafumane ulwazi olutsha.
Kuyamangalisa kakhulu inyani yokuba izatifikethi zibonelelwa ngexesha lezifundo ezimfutshane njengenkqubo yesidanga esipheleleyo. Kufanelekile ukuba uqaphele ukuba iikhosi ezimfutshane ezifunekayo eMzantsi Afrika kunye neenkqubo zesatifikethi zibonelelwa phantse kuyo nayiphi na intsimi onokucinga ngayo, ukusukela kwishishini ukuya kunyango ukuya kwintengiso kwitekhnoloji.
Ukongeza, iikhosi ezimfutshane ezifunekayo eMzantsi Afrika zibonelela ngezifundo ezininzi ezahlukeneyo zexesha elifutshane nelisisigxina. Eli xesha linokuhlala iveki ukuya kwiiveki ezintandathu, kuxhomekeke kwilizwe, iziko, kunye nekhosi eya kufundwa.
Ngezihlandlo ezinqabileyo kakhulu ezinye izibonelelo ezinje ngendawo yokuhlala ebonelelwe ngabafundi. Ke, kubalulekile ukuba ufumanise ukuba izibonelelo ezinje ngale zibandakanyiwe kwimirhumo yezifundo ezifutshane ezifunwayo eMzantsi Afrika onqwenela ukufaka isicelo sazo.
Izifundo ezifutshane ezifunwayo eMzantsi Afrika ziya zithandwa kakhulu, ngakumbi kuba inqanaba lentswela-ngqesho liyothusa. Abantu abaninzi baye babhenela ekufundeni izinto ezintsha ngaphandle kwezo bazifunda esikolweni. Nangona kunjalo, ezi zifundo zimfutshane zifunwa kakhulu eMzantsi Afrika ziqala kwiiveki ezithile ukuya kwiinyanga.
Bangamaxeshana okanye iinkqubo zesidanga sokuqala ezinikezelwa yeyunivesithi okanye ngumbutho. Izifundo ezimfutshane ezifunwayo eMzantsi Afrika zinokufundwa kumaqonga akwi-intanethi ngoncedo lwezinto ezisebenza kwimithombo yeendaba ezinje nge-Facebook, WhatsApp, Telegram, njalo njalo.
Uzifumana njani iikhosi ezimfutshane eziMfuno ePhakamileyo eMzantsi Afrika
Amaxesha amaninzi, ukufumana iikhosi ezimfutshane ezifunekayo eMzantsi Afrika ayisiyonto yokwenza umsebenzi. Umntu unokwazi iikhosi ezimfutshane ezifunwayo eMzantsi Afrika ngokujonga ngononophelo ubume bezinto kunye nendlela esebenza ngayo kwaye unento yokuyazi imisebenzi eqhubeka kakuhle ngelo xesha. Umzekelo, kukho amaxesha apho i-Cryptocurrency iya kuba ngumyalelo wosuku. Kwaye ukuba awuyimbiwa nayiphi na imali, awuyi kuba nofifi lwento eyenzekayo.
Enye indlela ukuzihlaziya rhoqo ngokukhangela kwiwebhu. Oku kunceda umntu ukuba azi iikhosi ezifutshane ezikhoyo ezifunekayo eMzantsi Afrika. Kananjalo, amaqonga anjenge-Udemy, i-Coursera, i-Alison, njl njl.
Iimfuneko zokufaka iZifundo eziFutshane eziMfuno ePhakamileyo eMzantsi Afrika
Ukufaka isicelo seekhosi ezimfutshane ezifunekayo eMzantsi Afrika, kuya kufuneka uyazi ukuba yeyiphi na idigri oyenzayo kunye nezifundo ezimfutshane eziya kuyizalisa.
Kukho iimfuno ezimbalwa ezifunekayo ukuze uthathe inxaxheba ekufundeni enye yezifundo ezimfutshane ezifunwayo eMzantsi Afrika, ngakumbi xa i-intanethi. Kuya kufuneka ugcwalise iifomu ze-intanethi ezibonisa idatha yakho kwaye mhlawumbi ipasipoti okanye ikhadi lesazisi ukuze uthembeke.
Kwimeko apho iikhosi ezimfutshane ezifunwayo eMzantsi Afrika kufuneka zifundwe ngaphandle kweintanethi, kuyakubakho amaphepha aza kuboniswa axhomekeke ikakhulu kuhlobo lwezifundo ezimfutshane oza kuzifunda. Nangona kunjalo, imfuno ngokubanzi enokuthi ibonelelwe ngexesha lobhaliso zezi:
Ikhadi lokuzazisa likazwelonke
Ileta yengcebiso, njalo njalo.
Phezulu kwe-7 Iikhosi ezimfutshane ezifunekayo eMzantsi Afrika
Ukwakha ubudlelwane babathengi
Uqeqesho Lwabameli bezeMpilo noKhuseleko
Ulawulo lweProjekhthi ePhambili yenye yeekhosi ezimfutshane ezifunekayo eMzantsi Afrika, kwaye zihlala zithathwa ngabaphathi beeprojekthi nabantu ababandakanyeka kushishino ngokusisigxina.
Aba bantu bathatha isigqibo sokuthatha iiprojekthi okanye ishishini labo liye kwinqanaba eliphambili kunesiqhelo ukuze lifike kwinqanaba lokusebenza okanye kwinqanaba lokusebenza. Enye yezona zifundo zidumileyo ze-Intanethi ezifunekayo eMzantsi Afrika ezibizayo. Nangona kunjalo, amaziko ohlukeneyo athatha abantu kule khosi eMzantsi Afrika.
Le yenye yeekhosi ezimfutshane ezifunekayo eMzantsi Afrika. Ngokuqinisekileyo kukho iindlela ezingaphezu kwekhulu zokukhulisa ishishini lakho ngendlela ekwi-intanethi. Intengiso yedijithali yenye yazo. Yinxalenye ebaluleke kakhulu kwishishini elikwi-Intanethi. Wonke umnini-shishini okwi-Intanethi uya kuphumelela ekukhuthazeni ishishini labo ukuba kuphela kwaye babenobuchule bokuthengisa ngentengiso yedijithali.
Imfuno yentengiso yedijithali kunye nabathengisi bedijithali ingaphezulu kokufunwa kwezifundo ezininzi zesidanga. Yiyo loo nto isizathu sokuba ithathwe njengenye yeekhosi ezimfutshane ezifunwayo eMzantsi Afrika.
Ungafaka isicelo sokuthengisa ngedijithali njengenye yezifundo ezimfutshane ezifunwayo eMzantsi Afrika kulo naliphi na iziko lemfundo elibonelela ngekhosi. Ngale khosi, uya kuba nolwazi kunye nezixhobo ezifunekayo zokuphumeza iindlela zokuthengisa zedijithali eziqhuba iziphumo zeshishini ezilungileyo.
Le yenye yeekhosi ezimfutshane ezifunekayo eMzantsi Afrika. Uninzi lwabantu lubanga ukuba kulula njengoko lunjalo, baziingcali xa kufikwa kwintengiso kodwa basilele ukunika ingqalelo ekwakheni ubudlelwane kunye nabathengi babo.
Ukwakha ubudlelwane nomthengi kubaluleke kakhulu ukuba ufuna bahlale bethembekile kuwe. Abathengi abathembekileyo bahlala bethetha ukukhula kweshishini kwaye banokuya kufikelela ekufumaneni abathengi abaninzi ngokukholisa abanye ngesizathu sokuba kutheni kufuneka bathenge iimveliso zakho.
Ukungabinako ukunxibelelana nabathengi bakho kuya kukhokelela kwintengiso ezimbalwa kwaye okubi ngakumbi kukuba uya kuphulukana nabo ukhuphisana nabo nokuba iimveliso okanye iimpahla zakho zikumgangatho onjani.
Kungenxa yoko le nto kufuneka uthathe ikhosi kulwakhiwo lobudlelwane nabathengi ukukunceda ukuba uphuhlise izakhono zonxibelelwano olufanelekileyo kunye nendlela kunye nezinye izakhono ezifunekayo ukwakha ubudlelwane obuhle kunye nabathengi bakho. Le yenye yeekhosi ezimfutshane ezifunwayo eMzantsi Afrika ikakhulu ezithathwa ngoosomashishini kunye nabanini abanethemba lokusebenza njengabameli bokhathalelo lwabathengi kunye nokufumana amathuba aphezulu kulwakhiwo lobudlelwane babathengi.
Le yenye yeekhosi ezimfutshane ezifunekayo eMzantsi Afrika. Abameli bezeMpilo noKhuseleko ngabanye babasebenzi ababalulekileyo kulo naliphi na iziko eMzantsi Afrika. Ngoku ziyimfuneko esemthethweni kwiindawo zokusebenzela kwaye zenza imisebenzi ebaluleke kakhulu imibutho engenakho ukuyenza ngaphandle kwayo.
Abameli bezeMpilo noKhuseleko ngabasebenzi abadla ngokuphucula impilo kunye nokhuselo lwabanye abasebenzi kwindawo yokuhlala ngokubanika iingcebiso malunga nokwenza izigqibo ezinokuba nefuthe elihle kwimpilo nakukhuseleko lwabo.
Le yenye yeekhosi ezimfutshane ezifunwayo eMzantsi Afrika ezijolise ekunikezeleni abantu ngabanye ukuqonda okufanelekileyo kwezempilo kunye neendlela zokuphucula nokugcina impilo. Le khosi inokuthathwa kwakhona ngabaphathi kunye nabaphathi abanqwenela ukuqonda indima yokuphucula ukhathalelo lwempilo phakathi kwabasebenzi babo kunye nezibonelelo ezivela kukhuseleko emsebenzini.
Ukuphuhliswa kwesoftware yenye yeekhosi ezimfutshane ezifunekayo eMzantsi Afrika enkulu kakhulu. Nangona kunjalo, ikwayikhosi emfutshane enxulumene nesayensi yekhompyuter. Yenye yeekhosi ezaziwa kakhulu eMzantsi Afrika. Iingcali kweli candelo zenza zonke iintlobo zemisebenzi efana noyilo, ukulawulwa kweenkqubo zekhompyuter, ukuvavanya ukusebenza kwenkqubo yekhompyuter, ukudala, njalo njalo.
Abaphuhlisi besoftware kunye neenjineli ziyafuneka kuwo onke amaziko eMzantsi Afrika asebenzisa iinkqubo zekhompyuter ekusebenzeni kwazo. Ukuthatha ikhosi emfutshane kuphuhliso lwesoftware kubandakanya ukuyazi imisebenzi yenkqubo yekhompyuter ngokupheleleyo kunye nokusetyenziswa kweenkqubo ezahlukeneyo zesoftware kwinkqubo yekhompyuter.
Le yenye yeekhosi ezimfutshane ezifunekayo eMzantsi Afrika ebiza kakhulu kwaye ibanzi.
Isatifikethi esifunyenwe emva kokufunda le khosi kufuneka sithathwe kwamanye amaziko anikezela ngeendlela zokufundisa ezikumgangatho wehlabathi ngexesha lengqesho. Ukuba ngumqambi wesoftware kwelinye lamaziko ahloniphekileyo eMzantsi Afrika kunomvuzo njengoko ukuphuculwa kwesoftware yenye yezona zifundo zinengeniso.
Rhoqo kunoko, intlawulo ephezulu iya kubaphuhlisi besoftware abaphambili kwimibutho emikhulu eMzantsi Afrika. Ngesi sizathu, le khosi imfutshane kufuneka ithathwe ngokungathí sina kwaye izatifikethi zifunyenwe ukuze ziqeshwe kwelinye lamaziko abalulekileyo eMzantsi Afrika.
Unokucinga nge-Cryptocurrency njengemali ekwi-Intanethi. Iye yaziwa kakhulu kwiminyaka yakutshanje ngenxa yexabiso eliphezulu. Uninzi lwabantu luthathe ukurhweba nge-imali yedatha ngenxa yokubuya okuphezulu. Nangona kunjalo, ukufumana uninzi lwayo kufuna yonke inkqubo eninzi ngomonde.
Yenye yeekhosi ezimfutshane ezifunwayo eMzantsi Afrika eziyindinisa kakhulu kwaye zakhiwe ngenkqubo yiyo loo nto uninzi lwabaqalayo bethatha ikhosi ekwi-intanethi kwi-cryptocurrency ukufumana ulwazi olungcono lokuthengisa.
Amaziko abonelela ngezifundo ze-cryptocurrency njengenye yeekhosi zabo ezifutshane ezifunwayo eMzantsi Afrika benza njalo ngootitshala abanamava kwihlabathi ledijithali. Ngale khosi imfutshane, uya kufunda ukuba ungazithengisa njani ii-cryptocurrensets ezinje ngeBitcoin, iDogecoin, kunye ne-Ethereum kumaqonga akwi-Intanethi. Uya kufunda kwakhona indlela yokwenza eyam kwezi mali.
Inkqubo yenye yeekhosi ezimfutshane ezifunwayo eMzantsi Afrika ezibandakanya zonke iindlela zokuphuhliswa kwesoftware zombini ezihamba kunye newebhu. Iyafana nophuhliso lwesoftware kuba abadwelisi benkqubo benza isoftware ngokusetyenziswa kweekhowudi. Inkqubo ikwabandakanya uyilo lwewebhu, uphuhliso kunye nolawulo.
Abacwangcisi bafuna emva kweeofisi kunye namaziko amakhulu. Isibonelelo esinye senkqubo yinkqubo yokuba umdwelisi nkqubo unokusebenza naphina nangaliphi na ixesha. Ziyimfuneko ukuseta iikhowudi ezisetyenziselwa ukubethela idatha nokuba inxulumene nabasebenzi okanye isiseko ngokwaso ukunqanda ukugqobhoza kwidatha yabucala ngabangeneleli okanye ngabantu.
Izifundo ezimfutshane zenkqubo zihlala zikuthatha kwiziseko zenkqubo kwaye zikufundise malunga neenkqubo zokwenza iilwimi ezinje ngePython, Java, njl.
Ii-FAQ kwiiKhosi eziMfutshane eziFunwayo eMzantsi Afrika
Ndingawufumana umsebenzi emva kokuthatha ikhosi emfutshane efunekayo eMzantsi Afrika?
A: Ewe! Njengoko bekutshiwo ngaphambili, izatifikethi ezifunyanwa ekupheleni kwekhosi emfutshane zinokusetyenziselwa ukufumana ingqesho kwimisebenzi elungileyo nehlawula kakhulu.
Iikhosi ezimfutshane ezifunwayo eMzantsi Afrika zisetyenziselwa ukongeza iikhosi zethu zesidanga.
Blog Post Ishishini kunye nemisebenzi Iikhosi ze-Intanethi izifundo zekhompyutha Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo funda kwi-intanethi
iikhosi ezimfutshane ezifunekayo eMzantsi Afrika
Post Previous:I-15 yeeKholeji ezincinci eziPhambili eMidwest
Okulandelayo Post:Izikolo eziPhambili zePrayimari ezili-15 eLagos eNigeria